अलिकति हात पो,ल्दा पनि ७ दिनसम्म पोल्यो भनेर सुनाई राख्थीन् तर आज चि’तामा ज’ल्दा किन केहि भनिनस् ?(भिडियो हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अलिकति हात पो,ल्दा पनि ७ दिनसम्म पोल्यो भनेर सुनाई राख्थीन् तर आज चि’तामा ज’ल्दा किन केहि भनिनस् ?(भिडियो हेर्नुहोस)
अलिकति हात पो,ल्दा पनि ७ दिनसम्म पोल्यो भनेर सुनाई राख्थीन् तर आज चि’तामा ज’ल्दा किन केहि भनिनस् ?(भिडियो हेर्नुहोस)
admin January 27, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमान्डौ , आफ्नै विवाहको निम्तो बाँड्ने क्रममा दु’र्घटनामा ज्या’न गु’माएकी रमिता भट्टको वि’योगमा उनको परिवार मात्र हैन धेरैको आखा रसाएका छन । मन रोएको छ ।रमितालाई गु’माउदा उनको पिरिवार बि’क्षिप्त बनेको छ।शो’क मा डु’बेको छ । विहिवारबाट नै प्रकाशले फेसबुकमा थरी थरीका स्टाटस लेखेर दुनियाँलाई रुवाएकाे छन् । उनले लेखेका स्टाटसहरुलाई तल प्रस्तुत गरेका छाै । बिहेको लगी किनेको चुरा पोते माला लगाएतको तस्बिर थियो ।
उक्त तस्विर सार्बजनिक गर्दै दिदि पार्वतीले लेखेको स्टाटसले फेरी सबैलाई भाबुक बनाएको छ । उनले लेखेकी छन – कति सपना सजाय थिसस बैनी हातमा मेहेन्दी चुरा पोते अनि सिउदोमा सिन्दुर लगाउला भनेर तिम्रो सपना सपनामै सिमित रह्यो । मेरो भाइलाई एक्लै पार्यौ । कसरी सम्हाल्ने । भाइलाई बिहेमा लगाउने सब किनेउ तर लगाउन पाएनौं। बैनी तिम्रो स्वर्गमा बास होस् । बैनी साचो मायामा भगवानको पनि आखा लाग्छ भन्थे हो रैछ ।
कति सपना देख्या होलि तिमीले ……..। १ वर्षअघि भागी विवाह गरेका कञ्चनपुरका उनीहरुको यही माघ १३ गते परम्परागत विवाहको साइत जुरेको थियो । यसैको लागि निम्तो बाँड्न हिँडेकी रमिताले ट्रिपरको ठक्करले ज्या’न गु’माएकी थिइन् । विवाहको ४ दिनअघि दु’र्घटनामा पत्नीको ज्यान गएपछि प्रकाशले फेसबुकमा अर्को भावुक स्टाटस लेखेका छन।
प्रकाशले लेखेका छन् – म छुटिमा आउदा बिहान मलाई उठाउथिस म १० मिनेट सुत्न दे भन्दा ब्लांकेट फालेर उठाउथिस अनि टि ल्याएर दिन्थिस मैले बिहान टि लिएर आइज भन्दा किन नल्येकी होस् ।किन ब्युझिन्स आज मलाइ ? उनले भगावन संग समेत आक्रोस पोखेका छन ।
उनि अगी लेख्छन रोटि बनाउदा सानो हात डढयो भने ७ दिन सम्म हात डढयो भनेर सुनाई राख्र्थी तर अज चितामा पुरै जल्दा मलाई किन केहि पनि भनेन किन सुनाइन मलाइ दुखिराछ भनेर ।
गायिका आस्था राउत सिक्किमबाट फर्के लगत्तै प्रहरी परिसरमा पुगिन्, के हुन्छ अब? हेर्नुहाेस्
अत्यन्तै दुखद खबर सडकमा गयो ज्यान टिपरको ठ क्करबाट २३ वर्षिय युवकको मृ त्यु!
काठमाडौंमा आमा छोरीी नै यस्तो अवस्थामा भेटिए (भिडियो सहित)
श्रीमद्भगवत गीताका मन छुने भनाईहरु, जसले हाम्रो सोच्ने शैली बदल्छ
सनसिटी अपार्टमेन्टमा तीन जनामा कोरोना र्‍यापिड टेस्ट पोजिटिभ देखिएपछि अपार्टमेन्ट पुरै लकडाउन (भिडियो)